I-8 ebalulekileyo iCISCO CCNA Training & Cisco Certifications
1. I-IPv6 Training Boot Camp
I-IPv6 Boot Camp Target Audience:
Iinjongo zekhosi ze-IPv6 Boot Camp
I-IPv6 Boot Camp Course Prerequisites:
2. Ukuphunyezwa kweCisco Multicast v2.0
Ukuphunyezwa kweeCisco Multicast V2.0 Iinjongo zeNkalo:
Ukuphunyezwa kweCisco Multicast v2.0 IiNtloko:
4. CISCO CCNP Ukuhamba nokutshintsha
I-CISCO CCNP Ukuhamba nokutshintsha Iimfuneko:
5. CISCO CCNA Ukuhamba kunye nokutshintsha
CCNA Iimfuneko zezwi:
7. CCNA iingxaki - CCNP TSHOOT
8. CISCO CCNA Uqeqesho loKhuseleko
ICISCO CCNA Uqeqesho loKhuseleko:
I-Cisco CCNA nguvulindlela jikelele kwi-IT elinceda imibutho ibambe amathuba okuba ngomso ngokubonisa ukuba izinto ezinokubakho ziza kwenzeka xa udibanisa ngaphambili.
Abaxhasi beCisco baqalisa izinto kwaye iqela elibalulekileyo le-DNA lethu liqhuba ubudlelwane bamakhasimende kunye nokusebenzisana nabo ukuze baqonde iimfuno zabo kwaye banike amalungiselelo anokukhuthaza ukuchuma kwabo.
Iingcamango zamalungiselelo ezijoliswe ekujonganeni nemingeni ethile yenkxaso yabaxhasi sele i-Cisco ukususela ekuqaleni kwayo. Iqabane elithile uLen Bosack noSandy Lerner, bobabini basebenza kwiYunivesithi yaseStford, babedinga ukuthumela i-imeyli kwiindawo zabo zokusebenza ezihlukeneyo ezikhoyo kwizakhiwo ezahlukeneyo kodwa bengenakho ngenxa yokusilela okutsha.
Intsha kufuneka yenzelwe ukulawula ummandla olwahlukileyo; kwaye ngenxa yoluhlu lokuvavanya uvavanyo lwawo - umtshini wokudibanisa uninzi wenziwa.
Ezinye zeCisco CCNA Training Course & Certifications zikhankanywe ngezantsi:
Isalathisi Isingeniso kwi-IPv6 Bootcamp (IPv6) Ukuqeqeshwa kweCisco kwi-Demand izifundo kuhlose ukuncedisa abaxhasi be-IPv4 abalindelayo kunye nokuhamba ukuze baqonde ukuhlukana kunye ne-IPv6 ilindele nokuhamba.
Ikhosi iqala ngokucacisa i-IPv6 efuna ukuyila, kunye nezinye iindibano ezintsha kwi-IPv6 ezithatha i-Address Resolution Protocol (ARP) kunye ne-Dynamic Host Configuration Protocol (i-DHCP, umzekelo, iPv6 Neighbor Discovery Protocol (NDP).
Iindawo ezihlukeneyo zeendawo ze-IPv6 zihlolwe ngenjongo yokuba ungayiqonda indlela eyahlukileyo ngayo phakathi kwe-IPv6 multicast, i-interface eseduze, kunye nee-adress addresses.
Ukudlulela kwixesha elidlulileyo, ezi modyuli ziyaziqhelanisa neempawu kunye ne-IPv6 eya kwiirekhodi kunye neendlela ezisisiseko kunye ne-Routing Information Protocol (RIP) ye-IPv6 (RIPng) kunye ne-Open Shortest Way Path yokuqala (OSPF) ye-IPv6 (OSPFv3).
Le khosi ijoliswe kwiingcali ezizodwa ezifuna ukuqonda okucacileyo kwe-IPv6.
Ekugqibeleni ukugqiba le khosi, kufuneka ube namandla oku:
Cwangcisa i-IPv6 kwiidilesi zehlabathi nakwii-yangasese kwii-interfaces zokutshintsha
Hlola ukusebenza kwe-autoconfig kunye nendlela i-EUI-64 yokujonga ngayo inokuchaphazela i-ID ye-ID © 2016 Cisco kunye neenqwelomoya zayo.
Uqikelele umbutho weendawo zokuhlala ezinxulumene nezizazisi ze-ID
Sebenzisa ingxaki yokuvelisa ukubonela ukutshintshwa kweentengiso kunye nokuvezwa kommelwane emva kwe-IPv6 ping
Qulunqa i-OSPFv3 esebenzisa imihlaba emininzi, umzekelo, iindawo ze-squat kunye neendawo ezingabonakaliyo (NSSA)
Cwangcisa abamelwane be-OSPF kwiindawo ezininzi ezingabhalwanga kwi-NBMA
Qwalasela i-RIPng ye-IPv6
Yenza ukwabelana ngokubhaliweyo kwe-OSPFv3 kwi-RIPng
IPv6 Boot CampIimfuno ezifunekayo:
Ngaphambi kokuthatha le khosi, kufuneka ube nekhono lokwenza oku:
Chaza ukuhlela iziseko kunye nokwakha ii-LAN ezichanekileyo
Ukuseka ukufumaneka kwe-Intanethi
Yi-certified CCNA®, okanye ifanelekile
Qulunqa, isikrini, uphinde uphande i-RIP, i-IGRP ephuculweyo (i-EIGRP) kunye ne-OSPF
Chaza iprojekthi yePL4
Chaza iProsoft Control Protocol Protocol (ICMP) kunye ne-ARP
Inkqubo yokuqalisa iCisco Multicast (MCAST) i-v2.0 inkqubo yinkqubo yootitshala beentsuku ezintlanu ezihamba ngeenkcukacha ze-IP ezininzi, ezibandakanya izicelo ezininzi, imithombo, abafumanayo, ulawulo oluhlangeneyo kunye nemigangatho ye-IP ye-multicast, (umzekelo, iProventic Independent Multicast, PIM) esetyenziswe ngaphakathi kwendawo yokulawula eyedwa (intradomain). Imiba yeengxaki ze-LAN kunye ne-IP yolwazi oluxinanisiweyo lukhuselekile.
Ikhosi inika iimpendulo ezizodwa malunga nokulungelelaniswa okucacileyo kwe-IP multicast ngaphakathi komthengisi okanye umcebisi. Iiprogram zemfundo zinika imigaqo kunye nolawulo lweengxaki zokusetyenziswa kwe-IP multicast kwi-Cisco switches. Ama-laboratory anikezela phantsi kwamava afunyanwa ngezandla ekulindeleke ukuba athumele ngokufanelekileyo i-IP ye-multicast.
Emva kokugqitywa kweli nqanaba, umfundi uya kuba namandla okuhlangabezana nale iithagethi jikelele:
Ulawulo lwe-IP ye-multicast, ukuvavanya umzekelo osebenzayo we-IP ngokubanzi kunye nokuqhubela phambili kubonakaliso kwi-IP ehlukeneyo, ukuqonda iingeniso ze-multicast kunye neemeko ezihambelanayo, kwaye unqume iintlobo ezahlukeneyo zezicelo ze-multicast ngenjongo ethile yokuphela ukuqonda i-IP ye-multicast imodeli yezobugcisa kunye indawo zokubeka iindawo ze-multicast kwiinkcukacha zokudibanisa iilesi zendawo yokugcina, kunye nezixhobo zokunqanda imilambo ye-multicast kwi-domain ye-LAN.
I-Protocol yangoku-Independent ye-Multicast engenelanga ngokwaneleyo (i-PIM-SM) njengeyona ndlela ihamba phambili kwi-convention ye-IP ye-multicast yendibano yokuthatha imiqathango kwimigangatho yokusebenza kwendibano kunye nezinto ezifihlakeleyo, ukhululeke kunye ne-determinism ehlanganiswe nemigaqo ye-multicast ye-scanty, kwaye ulungiselele kwaye uthumele i-PIM- I-SM kwiinkqubo ezizinzileyo ze-IP ze-multicast.
Ulwazi kunye neempawu umfundi kufuneka abe nazo ngaphambi kokuya kule khosi zifana nalezi zilandelayo:
Isiqinisekiso seCisco Certified Network (CCNA).
Ukuqonda ukusebenza kunye namalungiselelo okulungelelaniswa kweCisco kunye ne-LAN switches.
Ukuqhuba ukuhamba kwe-Cisco IP (ROUTE).
I-Cisco Data Centre i-Unified Computing Support Specialist ihloselwe ukuvavanya ulwazi lomfundi lwezinto ezisiseko zeCisco Unified Computing System kunye nekhono labo lokuqhuba i-Environment Centre Data Data. I-Cisco Data Centre Iingcali zeNkxaso yeeNkxaso zeNkxaso yeNkxaso yeComputer ziza kuhlolwa kwiindawo ezihamba kunye nazo:
Ukuqinisekiswa kweCisco Unified Computing System B kunye noC Series
I-Cisco Unified Computing System kwi-server yokwenza umsebenzi wokuhamba kweefama kunye nesakhelo sokutshintsha
Ukukhawulela intsapho yeCisco Nexus.
I-Cisco Certified Network Professional (CCNP) Ukuhamba kunye nokuchithwa kwezaziso kuvumela amandla okulungisa, ukuhlaziya, ukuqinisekisa nokuphanda amanethiwekhi amaninzi asekuhlaleni kunye nokusebenza ngokubambisana nabasemagunyeni ngokukhawuleza ukukhusela ukhuseleko, ilizwi, iindawo ezikude kunye nevidiyo.
Ukuhanjiswa kweCCNP kunye nokuchithwa kwesitifiketi kufanelekileyo kwabo bangaphantsi konyaka omnye wokuhlangana kweenkqubo kunye nabazimisele ukuqhubela iziphumo zabo nokusebenza ngokuzimeleyo kwiinkqubo eziyinkqubo ezinzima.
Abantu abaye bafezekisa i-CCNP Ukuhamba kunye nokutshintsha baye babonisa ubuchule obufunekayo kwiindawo ezinkulu zezoshishino, umzekelo, uququzelele ukuyila, ukwakhiwa kwe-bolster, i-designer designer okanye inkqubo yeengcali.
Ulwazi lokuhamba nolwazi lokutshintshwa kweso siqinisekiso luya kunika isiseko esihleliweyo njengoko ezi ziphumo zifana nezifanelekileyo kumanethiwekhi omzimba namhlanje kwaye i-virtualized ilungisa izinto zangomso.
I-Cisco enkulu yeCisco I-CCNA Ukuhamba kunye nokunikezela isatifikethi okanye nayiphi na isatifikethi seCisco CCIE esingahamba ngayo njengento ebalulekileyo.
Njengoko amaShishini ahambela kwimimiselo esekelwe kumlawuli, inxalenye kunye neziphumo ezifunekayo kwiziko lezengcali zihamba phambili kwaye zibaluleke ngaphezu kwanoma yimuphi umzuzu kwimemori yakutshanje.
Ukucwangcisa le nkqubo kuhambela, i-CCNA yokuPhumela nokuShintshela isatifikethi ayiyikukubeka nje ngokufunda ngokuqhubela phambili, kodwa isiqinisekiso sokuthi uhlala uhambelana nezixhobo zokufaneleka ezifunekayo ekunikeziseni izinto ezintsha.
I-Cisco Certified Network Associate Voice (i-CCNA Voice) iyavuma idibanisa ulwazi lwezinga kunye nokufaneleka okufunekayo ukulawula ilizwi elilungiselelwe. I-Cisco CCNA Izaziso zezwi ziqinisekisa ukuba ubuchule obufunekayo bubekwe kwiindawo ezithile zomsebenzi kwiintuthuko zezwi, umzekelo, intloko ye-intuthuko yezwi, ingcali yezwi kunye nomlawuli wezwi. Mna
Uyakwazi ukufumana iziphumo kwiinkqubo ze-VoIP, umzekelo, IP PBX, uqhagamshelwano lwe-IP, i-handset, ulawulo lweefowuni, kunye namalungiselelo omyalezo wefowuni.
I-CCNA izitifiketi zeevoti zophando iimpawu kunye nolwazi oluchongiweyo neCisco Unified Manager Manager. Ngokuqhelekileyo isebenziselwa imibutho emikhulu, umzekelo, urhulumente, imibutho emikhulu kunye neeyunivesithi.
Ngaphezulu, i-CCNA Voice Certification and skills skills survey (Cisco CallManager Express) (CME) kunye neCisco Unity Express (CUE) amalungiselelo rhoqo asetyenziswa yimibutho ephakathi ncinane, umzekelo, imibutho engaphantsi kwabameli be-2,000, imibutho yokuthengisa, kunye neyona nto kwimimandla.
Naliphina i-Cisco CCENT enkulu, i-CCNA Ukuhamba kunye nokutshintsha okanye nayiphi na isatifikethi seCisco CCIE ingahamba njengento ebalulekileyo.
Olu vavanyo luqinisekisa ukuba ithemba eliqhamo linokufunda kunye nokufaneleka okubalulekileyo:
Hlela kwaye wenze ukugcinwa okuqhelekileyo kwintsebenziswano eyinkimbinkimbi kunye nokuthungatha amanethiwekhi
Sebenzisa iindlela zokusebenza ezisisiseko kunye neendlela eziqhelekileyo ze-ITIL zokuhlangabezana nokulungiselela ukujongana neengxaki
Ikhosi ehamba kunye nolu qeqesho oluphakanyisiweyo loviwo.
Ukujongana neengxaki kunye nokugcina ii-Cisco IP Networks (TSHOOT)
ICisco Security Associate Network (CCNA Security) iyamkela idibanisa ukufunda kunye neendlela ezifunekayo zokukhusela amanethiwekhi e-Cisco.
Ngokuqinisekiswa kweCCNA Security, inkqubo ebonakalayo ibonisa iimpawu ezifunekayo zokwakha isakhelo sezokukhusela, ukuqonda ingozi kunye nobuthathaka kumanethiwekhi, kunye neengozi zokuphepha ezilinganisiweyo.
Iimodyuli ze-CCNA zezoKhuseleko ziphakamisa iziko lokulondoloza ukhuseleko, ukusekwa, ukujongana nokuxilongwa nokuqwalasela iinkqubo zezinto zokujongana nokunyaniseka, ukufihlakeleka nokufikeleleka kolwazi kunye nezixhobo, kunye nobuchule kwimpumelelo eyenziwa yiCisco njengenxalenye yesakhiwo sokhuseleko.
Nayiphi na iCisco CCENT esemthethweni, i-CCNA Ukuhamba kunye nokutshintsha, okanye nayiphi na isatifikethi seCCIE sinokuhamba njengento ebalulekileyo.
Indlela efanelekileyo kakhulu yokunciphisa izinga lokuhlawula kwiSayithi lakho lePressPress